Madaxwaynaha ERITREA Afewerki oo gaaray Addis Ababa | ogaden24
Madaxwaynaha ERITREA Afewerki oo gaaray Addis Ababa
Eritrea iyo Itoobiya waxaa u dhexeeyay colaad dhanka xadka ah tan iyo sannadkii 2000 markaasi oo heshiis nabadda ah lagu joojiya dagaalka oo tobbonaan kun oo qof lagu dilay.
Guddiga soo kormeero deegannada xadka ah ee lagu muransan yahay ayaa la sameeyay kaddibna waxaa laga la saxiixday heshiis magaalada Badme lagu siiyay Eritrea halka Itoobiya ay diiday inay aqbasho in magaaladaasi lagu wareejiyo Eritrea.
Colaadda labada dal waxay saamayn ku yeelatay gobolka, waxay u kala safteen dhincayda ku dagaallamaya Soomaaliya, Eritrea waxaa lagu eedeynayay inay taageerto kooxaha Islaamiyiinta ee ka dagaalama Soomaaliya halka Itoobiya ay taageerto dowladda Soomaaliya.
ilaa xilligii uu Abiy Axmed uu Ra’iisul wasaare Itoobiya ka noqday wuxuu billaabay isbaddalo cusub.
Wuxuu kulan magaalada Asmara kula qaatay madaxweynaha Eritrea halkaaso ay heshiisyo dhowr ah ku kala saxiixdeen.
Labada hoggaamiye waxay sheegeen inay ka shaqaynayaan sare u qaadidda arrimaha dhaqaalaha labada dal iyo xoojinta xiriirka dublumaasiyadeed.
Waxaa markii ugu horreysay laisugu furay khadadka telefoonada labada dal tan iyo sannadkii 1998-kii, dadweyanaha labada dal ayaa soo dhaweeyay tallaabada isgaarsiinta labada laisku furay, waxayna durbadiiba billaabeen inay wacaan eheladooda kala joogo labada dal.